Ukugqoka imishini kuyinto ethakazelisayo kakhulu. Uma ubheka izithombe ezenziwe ngesandla, uyayithanda ikhono futhi uyamangala ukuthi, ngosizo lwezintambo, ingcweti ingabonisa lokhu noma icebo ngezandla zakhe. Yeka ukuthi kuhle kangakanani futhi ngokucacile ukubeka izici, ukuthi ziveza kanjani ngokuqondile imingcele!
Inqubo yokudweba umdwebo owodwa ubude ngokwanele. Ngezinye izikhathi kuyadingeka ukuba inkosi isebenze izinyanga eziningana ngendalo eyodwa. Kodwa umphumela uhlale ujabulisa.
Ukuthi isithombe esiqediwe esineqile sesifanele ukudunyiswa okuphezulu, kubalulekile ukukhetha izinto ezidingekayo esigabeni sokuqala somsebenzi. Kusukela ekukhetheni kwezintambo, indwangu, inaliti, uphawu lokubeka uphawu, umphumela uzoxhomeka. Ngakho-ke, ukukhethwa kwalezi zinto kufanele kunikelwe ukunakwa okukhethekile. Ake sixoxe ukuthi yiziphi izintambo ezizozikhetha. Namuhla imikhiqizo eminingi enjalo inikezwa. Inkampani ngayinye inezinzuzo zayo kanye nezinkinga zayo. Ezinye imikhiqizo ziphela ngokushesha, ezinye zihamba uma zigeza, ezinye ziyashisa. Yiziphi ezizozikhetha? Yiqiniso, udinga ukubeka phambili izintambo zekhwalithi. Kodwa intengo yabo ayithengi kuwo wonke umuntu. Futhi ngokuvamile uthanda ukuthi eshibhile, isibonelo, mulina "Gamma." Siphakamisa ukuthi siqonde, kungakhathaliseki ukuthi kuyadingeka yini ukusebenzisa imikhiqizo yalesi siqine ukuze uthole izindwangu zokwazisa.
I-mulina "Gamma" eyenziwe ngekotoni yaseGibhithe yenziwa. Umkhiqizi uthi lezi zintambo azikho ngaphansi kwezinto ezibiza kakhulu. Ikhwalithi yabo ihle kakhulu, futhi imibala ikhanya futhi icebile. Emsebenzini oqedile balala phansi, ungapheli futhi ungasula ngesikhathi sokugqoka.
Ukuze uhlole, kungakanani umenzi мулине "Gamma" ekhuluma ngobuqotho ngezimpahla, kungenzeka, kuphela uma uzame ebhizinisini. Ngeke sibeke amazwana kulolu lwazi, kepha mane nje uchaze ukuthi yiziphi izinzuzo nezimo eziyinkimbinkimbi ezenza lezi zintambo - i-Gamma mullet.
Izinzuzo zenkampani "Gamma"
Okokuqala, izintambo ziyatholakala kubasebenzi abaningi abanekhono ngentengo. Futhi ikakhulukazi iyabonakala, uma izinto ezikhethiwe zitholwe isithombe esikhulu. Vumelana, uma uthenga izimbali ezingu-10 ezifakwe phansi, khona-ke umehluko wamasenti ambalwa nge-hutch cishe awubonakali. Futhi uma udinga ukuthenga okungaphezu kwekhulu izinqwaba? Yebo, intengo iyinzuzo ecacile yale micu.
Okwesibili plus: lezi zingxube zingatholakala kalula. Zithengiswa kunoma yisiphi isitolo esikhethekile. Uma omunye umkhiqizi wezintambo uboniswa kuhlelo lokudala indalo, bese usebenzisa ikhadi lokuhumusha, ungakhetha umbala ofanele phakathi kwemikhiqizo ye "Gamma". U-Mouline wale nkampani unemibala emikhulu nemibala.
Mhlawumbe, lezi yizinzuzo ezimbili eziyinhloko ongacacisa.
Alahlekile. Futhi kungakhathaliseki ukuthi bangaki abasebenza ngezinduku abadumisa uGumma ekuqaleni, ekugcineni bayokwenza okuthandayo kwezinye izintambo. Kungani?
Okokuqala, izigameko ze-"Gamma" eqinile zenzeka ngezikhathi ezithile (nakuba lokhu kubonakala ngezinye izintambo). Kwanele ukwenza iphutha ngenkathi kuhlanzwa, ukomisa kanye nokwabiwa kwezinto zokugqoka eziqediwe, njengoba zizolahlwa nje. Izinkinobho "Gamma" kakhulu kakhulu moult futhi balahlekelwa umbala wazo nokukhanya emva kokugeza. Futhi, uma zikhonjiswa ngokungalungile, ziyaphela, futhi isithombe silahlekelwa ivolumu yayo.
Okwesibili, uma uzobopha isikhumba esikhulu, khona-ke ulungele ukuthi izintambo ze "Gamma" zizolahlekelwa ubushelelezi bokuqala.
Okwesithathu, uma uqhathanisa, thatha imikhiqizo yenye inkampani. Uzoqaphela ukuthi i-mulina "Gamma" ilula, ayi-unsaturated, futhi ngokuphambene nalokho - iphelile, ifana.
Sichaze zonke izinzuzo eziyinhloko nokungalungi kwalokhu okubonakalayo. Uzowasebenzisa - kungcono kuwe.
Ungayigqoka kanjani inhloko ekhanda lakho ukubheka isitayela?
Ukupholisa egalaji ngomusi engaphansi: izimiso amadivayisi futhi izinguqulo